LG V30 Plus अगस्त 31 मा प्रस्तुत हुने पुष्टि भयो Androidsis
31१ अगस्तमा, एलजीले एलजी वी present० प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, कम्पनीको अर्को फ्ल्यागशिप जुन एक धेरै स्पष्ट उद्देश्यको साथ आएको छ: सर्वशक्तिमान सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट 30. सँग प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माताले सबै मासुलाई ग्रिलमा राख्ने छ। यसको मुख्य प्रतिस्पर्धीको लागि बिक्री चोरी र यस्तो लाग्छ कि यो पनि LG V8 Plus प्रस्तुत गर्दछ, वास्तवमै आश्चर्यजनक भिटामिन संस्करण।
र यो हो कि धेरै पोर्टलहरूले चुहावट प्रतिध्वनि गरेका छन् जुन एलजी वी Plus० प्लसले August१ अगस्तमा पनि प्रकाश देख्ने सम्भावनालाई औंल्याउँछ। तर LG V30 Plus र LG V31 बीच के भिन्नताहरू हुनेछन्?
LG V30 Plus पनि महिनाको अन्तमा प्रस्तुत गरिनेछ
सुरु गर्न LG V30 Plus को आन्तरिक मेमोरी डबल हुनेछ परम्परागत मोडेल भन्दा। यस तरिकाले, V30 को सब भन्दा पूर्ण संस्करण आन्तरिक भण्डारणको १२128 जीबीको साथ बजारमा हिट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्को उल्लेखनीय विवरण अडियो सेक्सनमा आउँनेछ। एलजीले यसको V10 बाट हामीलाई पहिले नै एक मानक DAC समावेश गरेर चकित गर्‍यो र यस्तो देखिन्छ कि LG V30 Plus ले हामीलाई फेरि यस विषयमा आश्चर्यचकित गर्नेछ। तेस्रो ठूलो भिन्नता यो हो कि LG V30 Plus मा पनि वायरलेस चार्जिंग हुनेछ, जुन हामीले मन पराउने छौं किनकि हामी केबलहरू प्रयोग नगरी नै आफ्नो फोन चार्ज गर्न सक्दछौं। यसको मूल्य? अहिलेको लागि, LG V30 700०० को आसपास हुन अपेक्षा गरिएको छ, त्यसैले V30 Plus को लागत १ 175 युरो अधिक हुनेछ, 850 यूरो। लगभग केही पनि छैन।
हामी देख्नेछौं कि LG V30 Plus कसरी बिक्रीको सर्तमा काम गर्दछ, जबकि हालका लागि जानकारी एक अफवाह मात्र हो र हामीले प्रस्तुतिको मितिलाई पर्खनु पर्नेछ। जे भए पनि, र निर्माताको पृष्ठभूमिमा हेर्दा, म निश्चित छु कि लीक भएको मूल्य वास्तविक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » LG » LG V30 Plus, अगस्त 31१ मा प्रस्तुत हुने पुष्टि भयो